नारायणी नदिको सतह चेतावनी स्तर नाध्यो – Saurahaonline.com
नारायणी नदिको सतह चेतावनी स्तर नाध्यो
चितवन, ११ साउन । नारायणी नदीको सतह एक्कासी बढेपछि पानीको सतह चेतावनीको स्तर नाघेको छ । जसका कारण नदीको चितवन र नवलपरासी क्षेत्रका स्थानिय जनतामा त्रास फैलिएको छ । पानी सतह बढेपछि नदी तटमा लगाईएका साईरनहरु अहिले बजाईएका छन् । जलस्तर मापन केन्द्र देवघाटले दिएको जानकारी अनुसार अहिले ८ मीटर ०६ सेमी पानीको बहाव रहेको रेकर्ड भएको छ ।
विहान १० बजे नदीको जलस्तरलाई ७ मीटर ३५ सेमी रेकर्ड गरिएको थियो भने विहान ८ बजेको समयमा यो जलस्तर ६ मीटर ७३ सेमी मापन गरिएको थियो । लगातार बढीरहेको जलस्तर ८ मीटर ४० सेमी लाई खतरा मानिएको छ ।
पानीको सतह बढन थालेपछि नारायणी नदी छेउछाउका स्थानीय बासीन्दाहरुमा त्रास फैलिएको छ । स्थायिन बासीन्दाहरु आ आफना सरसामान जोगाउन लागि दोडधुप गर्न थालेका छन् ।
नारायणी नदीको पानिको सहतले चेतावनी स्तर नाधेकाले पोखरा लगायतका पहाडी भूभागमा राती परेको अबिरल वर्षाका कारण बढीरहेको नारायाण्ी नदीको पानीको बहाव अभै बढन सक्ने चेतावनी दिईन थालेपछि नदी छरछिमेकका बासीन्दा त्रसित बनेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
यसैविच त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. ४ सुस्ता लगायत अन्य वडाहरु पनि नारायणीको उच्च जोखिममा छन् । त्यस्तै कुडिया, नरसही, पकलिहवा गाविस उच्च जोखिम परेको छ ।
नारायणी नदीको कटानको प्रत्यक्ष चपेटामा रहेको ए गैप बांध र बी गैप बांधमा नदी कटानको खतरा बढेको छ । बी गैप बांधको १३ नं. ठोकरमा विगत एक हप्तादेखि भैरहेको निरन्तर कटान रोकिएको छैन भने ठोकर उच्च जोखिममा परेको छ ।
भारतीय पक्षले कटान नियन्त्रणका लागि मर्मत कार्यकमा तिब्रता ल्याएपनि कटान नियन्त्रण गर्न नसकिएपछि छिमेकी गाउमा चिन्ता बढेको छ । ठोकर नं. १३ को कटान अबिलम्ब नियन्त्रण गर्न नसके गण्डक क्षेत्रको १३ वटा गाविसहरु पुर्ण रुपमा डुबानमा पर्न सक्ने बताइएको छ । जसले लाखौं व्यक्ति प्रभावित हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।
नरसही, पकलिहवा र कुडिया गाविसका अधिंकाश जनता आफना घरका बहुमूल्य सामानहरु सुरक्षित स्थानमा लैजान थालेका छन् ।